Khabiirka Sky Sports Ee Paul Merson Oo Sheegay In Romelu Lukaku Aanu U Maskax Fiicnayn In Ku Filan Si Uu Chelsea Ugu Ciyaaro Isaga Oo Taageero Buuxda U Muujiyay Alvaro Morata. - Laacib.net
Khabiirka Sky Sports Ee Paul Merson Oo Sheegay In Romelu Lukaku Aanu U Maskax Fiicnayn In Ku Filan Si Uu Chelsea Ugu Ciyaaro Isaga Oo Taageero Buuxda U Muujiyay Alvaro Morata.
Khabiirka Sky Sports ee Paul Merson ayaa ku dooday in Romelu Lukaku aanu lahayn maskax fiican oo uu Chelsea ugu ciyaari karo isla markaana uu gaga garab ciyaari lahaa Eden Hazard iyo Cesc Fabregas wuxuuna Paul Merson xusay in Alvaro Morata uu yahay kan ku haboon qaab ciyaareedka kooxda Antonio Conte ee Chelsea. Paul Merson ayaa jamaahiirta Chelsea u sheegay in Morata uu waqti uu kula qabsado kubbada cagta England uu u baahan yahay.
Antonio Conte ayaa doonayay in uu Romelu Lukaku dib ugu soo celiyo Stamford Bridge laakiin Mourinho iyo kooxdiisa Manchester United ayaa ku guulaystay in xidiga ree Belgium uu Everton kaga soo biiray Old Traffrod taas oo keentay in Chelsea ay iyaduna u jeedsatay Alvaro Morata oo bartilmaameedka kowaad u ahaa Manchester United oo ay Real Madrid isku mari waayeen.
Paul Merson ayaa aaminsan in Chelsea ay faa’iido u tahay in Romelu Lukaku uu Manchester United ku biiray taas badalkeedana uu Morata ku soo biiray Chelsea. Paul Merson ayaa si cad u sheegay in Lukaku aanu lahayn maskax fiican oo uu kaga garab ciyaari karo xidigaha hal abuurka Blues u sameeya.
Paul Merson oo la hadlayay wargayska Daily Star ayaa yidhi: “Alvaro Morata waa ciyaartoy heer sarre ah laakiin intee in leeg ayay ku qaadan doontaa in uu saldhigto?.Anigu ma filayo in ay Chelsea seegtay Romelu Lukaku, Morata ayaa kaga haboon iyaga, laakiin waxa uu u baahan yahay waqti uu kula qabsato kubbada cagta England”.
Paul Merson oo Lukaku dhaliil wayn u soo jeedinaya ayaa yidhi: “Lukaku in ku filan uma maskax fiicna in uu la ciyaaro Eden Hazard iyo Cesc Fabregas. Isagu waxa uu u baahan yahay kubbad sarre taasna waxa uu ka helayaa Manchester United”.
Romelu Lukaku iyo Alvaro Morata oo ka mid ah ciyaartoyda xagaagan lacagaha badan lagula soo saxiixday ayaa laga sugayaa saamaynta ay xili ciyaareedkan ku yeelan doonaan kooxahooda Manchester United iyo Chelsea iyada oo wax qabadkooda si joogto ah laysku barbar dhigi doono maadaama oo uu midba kooxda kale bartilmaameed u ahaa.
Alvaro Morata ayaa badalay Diego Costa oo Chelsea ay go’aan ku gaadhay in aanu kooxdeeda dib ugu soo laaban karin halka Lukaku uu badalay Ibrahimovic laakiin xili ciyaareedkii la soo dhaafay Costa iyo Ibrahimovic ayaa ka mid ahaa xidigaha goolasha ugu badan ka soo dhaliyay Premier Leaque, sidaa daraadeed Lukaku iyo Morata ayay shaqo adagi u taal si ay boosaskan u buuxiyaan.